North Bay, CA • Body Mass sy NuRu Massage
Zahao ny tolotra Nuru Massage sy Body Rub.
The North Bay dia faritany iray ao amin'ny faritr'i San Francisco Bay, any California, Etazonia. Ny tanàna lehibe indrindra dia i Santa Rosa, izay tanàna fahadimy ao amin'ny Bay Area. Io no toerana misy ny faritra divay Napa sy Sonoma, ary izy no faritra kely mponina sy kely tanàna amin'ny faritra Bay. Izy io dia misy kaontinanta Marin, Napa, Solano ary Sonoma. Hamarino raha Nuru fanorana ary Voninkazo manolotra.